Global Voices teny Malagasy · 4 Febroary 2019
04 Febroary 2019
Tantara tamin'ny 04 Febroary 2019
Global Voices Advocacy no nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana Blogging for a Cause an'ny Zemanta. Tranonkala isan-karazany maherin'ny 60 no voatendry, ary samy nahazo 1200 dolara ny dimy voialohany nahazo vato betsaka indrindra. Misaotra tamin'ny fanohanana rehetra!!
Shina04 Febroary 2019
Nesorin'ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny Internet Governance Forum ny afisy tsy dia lehibe, amin'ny teny Anglisy, mampiroborobo ny boky fizarana faha-2 "Access Controlled" an'ny ONI,
Tamin'ny voalohandohan'ny volana Aogositra, nametraka fisoratana amin'ny tena anarana ireo tranonkala vavahadim-baovao lehibe. Ireo mpiserasera te-handefa fanehoan-kevitra antserasera dia tsy maintsy mameno taratasy fisoratana anarana izay manangona ny lahatahirin'ilay mpiserasera, ny laharan'ny karapanondro, ny laharana an-tariby sy ny adiresy.
Iràna04 Febroary 2019
Tiorkia04 Febroary 2019
Ny Global Voices sy ny #10TaonaFanamby
Toy ny ahoana ny endriky ny pejy Global Voices tamin'ny folo taona lasa ? Jereo miaraka amin'ny #10TaonaFanamby izany.